Wenza kanjani amehlo amancane | Bezzia
USusana Garcia | 05/06/2021 20:00 | Ubuhle, Maquillaje
Uma une amehlo amancane uzofuna ukudala inkohliso yokuthi makhulu, okuthile okungenziwa ngokuqinisekile ngezimonyo. Uma kukhona okuthile okuhle ngokwenza izimonyo, kungukuthi kusivumela ukumboza noma ukufihla ukukhubazeka okuthile futhi sithuthukise ezinye izingxenye zobuso ngokuthinta okumbalwa, imibala namasu. Ngakho-ke ake sibone ukuthi sakha kanjani amehlo amancane, uhlobo lwamehlo okumele lukhuliswe.
I-Los amehlo amancane angaba yi-protagonists nokwakheka kwakho. Kulezi zinsuku izici zingashintshwa uma sazi ukuthi singakwenza kanjani, sigqamisa okuhle okukhona ebusweni. Kulokhu, kunamaqhinga athile angakusiza ukwenza amehlo akho abonakale emakhulu kakhulu ngokusebenzisa izimonyo ngendlela efanele.
1 Khanyisa uzungeze amehlo
2 Gwema izithunzi ezimnyama noma ze-matte
3 Sebenzisa izithunzi ezikhanyayo
5 Umugqa wamanzi ongenalutho
6 Gqamisa amashiya akho
Khanyisa uzungeze amehlo
Ukugqamisa amehlo amancane, akubalulekanga kuphela ukwakheka esikusebenzisa kulezi, kodwa futhi nalokhu esikusebenzisa ebusweni obuzungeze amehlo, ngoba kuyasiza ukubenza bagqame. Kufanele usebenzise ukufihla endaweni yemibuthano emnyama ukukhanyisa le ngxenye futhi ngaleyo ndlela wandise umphumela weso lokwenza izimonyo. I- izinkanyiso futhi zisisiza ukuba sikhanyise ngokwengeziwe kule ndawo ukudonsa amehlo. Lezi zinyathelo kufanele zithathwe ngaphambi kokuqala ukwakheka kwamehlo, njengoba zisebenza njengesisekelo.
Gwema izithunzi ezimnyama noma ze-matte
Okwenziwa yilolu hlobo lwezithunzi kwenza iso libe lincane. Amathoni we-matte asusa ukukhanya ngakho-ke awandisi indawo, ngakho-ke kungcono ukuyisebenzisa izithunzi ezinomphumela we-iridescent noma wensimbi, ukuze zibonise ukukhanya futhi zenze iso ligqame, likhulise. Futhi, izithunzi ezimnyama zenza amehlo abonakale emancane. Esikhathini samanje lawo mehlo abhemayo agcwele izithunzi ezimnyama zasebusuku asele ngemuva, ngoba ukubukeka okuvuleke kakhulu futhi okubanzi, okukhanyayo kuyadingeka, kunezithunzi ezisebenza imini nobusuku.
Sebenzisa izithunzi ezikhanyayo
Kokubili endaweni engenhla naku- ngezansi kufanele usebenzise amathoni alula futhi anqunu. Lezi zinhlobo zemithunzi emathunzini zisiza amehlo abukeke ebanzi kakhulu. Uma nazo zinokuthinta ukukhanya, uzoba nesithunzi esifanele ukwenza amehlo akho avelele kakhulu. Kungumqondo omuhle ukusebenzisa lezi zithunzi engxenyeni yejwabu leso elihambayo kodwa nasendaweni engezansi, ukukhulisa iso.
El i-eyeliner nayo ingasetshenziselwa ukwelula iso ngokubonakalayo. Sebenzisa umugqa omuhle ngombala omnyama futhi ungasebenzisa le-classic enhle kakhulu yokwenza. Kungcono ukukwenza ngaphandle kwayo ezansi, kepha phezulu umugqa omncane onwebekayo ekugcineni uzokwenza iso libonakale lishwabene futhi likhudlwana. Ngokusobala ukwenza umugqa omuhle kudinga ukuzijwayeza okuthile kanye ne-eyeliner enembile, kepha umphumela muhle.
Umugqa wamanzi ongenalutho
Ulayini wamanzi yingxenye engezansi yeso, leyo ndawo eyayivame ukupendwa ngomnyama ngamehlo. Kodwa-ke, lokhu sekungaphandle kwemfashini futhi kwenza namehlo avele amancane. Icebo lamehlo esevele mancane futhi afuna ukukhulisa ukupenda lo mugqa eyeliner emhlophe ehlakaniphile nephumelelayonjengoba ikhulisa iso.
Gqamisa amashiya akho
Akubalulekile kuphela ukugqamisa amehlo, kepha futhi namashiya, kusukela lezi zisiza ukuhlela ukubukeka nokubeka inzalo kuyo. Indawo yeshiya iyingxenye eyenza amehlo agqame futhi. Uma zichazwe kahle, zifaka iso bese zenza izimonyo zigqame kakhulu, zonke zihlangene, ukwenza iso libonakale likhudlwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Wenza kanjani amehlo amancane
Ukuqeqeshwa okusebenzayo, ukuthi kuqukethe ini nokuthi ungakwenza kanjani ekhaya